Mareykanka oo Sheegay In Maalin Walba Ay Dagaalka Kaga Baxdo 250 Milyan oo Dollar! – Shabakadda Amiirnuur
Kaydka Sawirada, Maxaa Cusub, Uncategorized, Wararka Dibadda, Wararka Gudaha
November 6, 2017 5:33 am by admin Views: 171
War-bixin kasoo baxday sirdoonka Mareykanka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano CIA ayaa lagu soo bandhigay dhaqaalaha xukuumadda Washinton uga baxay dagaalka ay kaga jirto qaar badan oo kamid ah wadamada Islaamka, wixii ka dambeeyey weeraradii 11 Septembar.
Hantida kaga baxday dagaalka illaa iyo hadda socda ayaa waxay gaareysaa 1.46 Trillion oo dollar, taas oo ka dhigan in maalin kasta oo 16-kaas sano kamid ah ay Mareykanka uga baxdo waxa ay ugu yeeraan (ladagaalanka argagixisada) adduun gaaraya 250 Milyan oo dollar.
Dhaqaalahan la sheegay kuma jirto hantida uga baxda Maraykanka dhanka Sirdoonka, Amniga iyo arimaha lamidka ah, waana kaliya lacagta uga baxay hubka, mushaarka ciidamada iyo daaweynta Askarta dhaawacantay.
Haddaba haddii uu sannado uu sii socodo dagaalka uu Maraykanku kaga jiro dunida Muslimka ah ayaa waxaa shaki la’aan ah in uu duullaanadiisa joojiyo xilli uu dhaqaalihiisu burburay wax faa’iido ahna uusan soo hoyn.
Dagaalka dhanka dhaqaalaha ayaa ah Istiraatiijiyad uu dejiyay Sheykh Usaama bin laadin oo xooga saari jiray in Maraykanka uu dhaqaalaha ka baaba’iyo, waxaana hadda muuqaneysa mira dhalka Istiraatiijiyadda Sheekha oo la dilay bishii May ee sanadkii 2011.